सम्पादकीय Archives - Page4of5- NepalPatra.com
अब अस्पतालकाे सिण्डिकेट कहिले अन्त्य हुन्छ सरकार?
नेपालपत्र, २२ वैशाख २०७५ । सरकारले २५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहँदै अाएकाे सिण्डिकेटकाे अन्त्यकाे लागि चालेकाे कदम सबैकाे स्वागतयाेग्य बनेकाे छ । र सरकारले अब केही समय दह्राे खुट्टा टेक्ने हाे भने यातायातकाे सिण्डिकेट इतिहास बन्ने निश्चित छ । तर यातायातमा जस्तै अस्पतालकाे सिण्डिकेट अझ जटिल र जाेखिमयुक्त देखिन्छ । अस्पतालमा डाक्टरले विरामी उपचार गर्ने […]
सिण्डिकेट विरुद्धकाे कदममा जनताले साथ दिनेछन्, पछि हट्नु भएन सरकार !
नेपालपत्र, २१ वैशाख २०७५ । नेपाल सरकारले विगत २५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहँदै अाएकाे सिण्डिकेट अन्त्यकाे प्रयासमा नियमावली बनाएर लागू गरेकाे छ । अब सरकार सिण्डिकेट विरुद्धकाे कदममा सफलता पाउने अन्तिम चरणमा रहेकाेे छ । सरकारकाे याे कदमकाे सबै सर्वसाधारण जनताले स्वागत गरेका छन् । सिण्डिकेटले पारेकाे प्रभाव भनेकाे सीमित व्यक्तिकाे लागि यातायात व्यवसायमा हालिमूहाली […]
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : कति स्वतन्त्र छन पत्रकार !
नेपालपत्र, २० वैशाख २०७५ । अाज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएकाे उत्सवकाे रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयाे । नेपालमा पनि पत्रकार महासंघकाे अायाेजनामा विहान प्रभातफेरी गर्याे । देशभर फ्रिडम फोरमले एक वर्ष (मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८) सम्म गरेको मिडिया अनुगमनपछि बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका […]
३३ किलाे सुन तस्करी : लहराे तान्दा पहराे हल्लियाे !
नेपालपत्र, १९ वैशाख २०७५ । पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करीकाे घटना एक पछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक भइराखेकाे छ । अधिकांश घटनामा मुख्य तस्करी भन्दा पनि भरिया मात्रै समातिने र कारवाही भाेग्न बाध्य भइरहेका थिए । तर पछिल्लाे सुन तस्करीकाे घटना रहस्यमयी तरिकाले सार्वजनिक हुँदैछ । फागुन १९ गते प्रहरीले मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ७ घर भएका […]
अाैपचारिक कार्यक्रममै सीमित श्रमिक दिवस, कहिले हाेला श्रमकाे सम्मान?
नेपालपत्र, १८ वैशाख २०७५ । अाज १२९ अाैं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, विश्वभर श्रमिकहरूले अाफ्नाे अधिकार सुनिश्चत भएकाे दिनकाे रूपमा मनाउने गर्दछन् । अाज पनि देशैभर श्रमिकहरूले विविध कार्यक्रम गरेर श्रमिक दिवस मनाए । तर अाजकाे कार्यक्रम पनि विगतकाेभन्दा कुनै नाैलाे देखिएन । प्रमुख दलका प्रमुख नेताले एकभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भएर शुभकामना दिने बाहेक खासै […]
यातायातमा सिन्डिकेट हट्याे, हटेन बेथिति
नेपालपत्र, १७ वैशाख २०७५ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा विगतदेखि रहँदै अाएकाे सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने निर्णयसँगै यातायात व्यवसायीले अाफ्नाे व्यवसाय कम्पनी मातहत रहेर सञ्चालन गर्न सुरूगरिसकेका छन् । यसले यातायात क्षेत्रमा रहेकाे व्यथिति अन्त्य हुने अाशा गरिएकाे छ तर सरकारले कडा रूपमा अाफ्नाे उपस्थिति नदेखाउने हाे भने यस क्षेत्रमा रहेकाे अन्य विसंगति भने हट्ने देखिदैन […]
सांस्कृतिक सम्पदाकाे पुनर्निर्माणमा नमुना बन्याे भक्तपुर
नेपालपत्र, १६ वैशाख २०७५ । तीन वर्ष अगाडि अर्थात २०७२ साल वैशाख १२ गते गएकाे भूकम्पले देशका धेरै ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदामा ठुलाे क्षति पुर्याएकाे थियाे । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षति राजधानीका सम्पदाकाे भएकाे थियाे । विशेषगरी भूकम्पकाे क्षतिपछि भक्तपुर र काठमाण्डाैमा सरकारले पुरातत्व विभागकाे मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने बताएकाे छ र त्यसै अनुरूप काम […]
प्रदेश नीति: पर्यटन प्रवर्द्धनबाटै प्रदेशकाे प्रगति
नेपालपत्र, १५ वैशाख २०७५ । सात प्रदेशका प्रमुखले अा-अाफ्नाे प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सबै प्रदेशकाे नीति र कार्यक्रममा एउटा समानता देखिएकाे छ। सातै प्रदेशले विकासकाे लागि पर्यटनलाई पहिलाे राेजाइमा राखेका छन् । नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटक भित्र्याउने निक्कै सम्भावना छ । हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि पाथिभारा, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, डाेलेश्वरधाम, मनकामना, रामजानकी मन्दिर जस्ता […]
काेरियाली संयुक्त वक्तव्य : शान्तिको नयाँ युग शुभारम्भकाे सन्देश
नेपालपत्र, १४ वैशाख २०७५ । अाज विश्वकाे राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएकाे छ । १९५३मा भएकाे युद्धपछि बिग्रिएकाे उत्तर र दक्षिण काेरियाविचकाे सम्बन्धमा अाज काेरियाली सम्मेलनका दाैरान भएकाे संयुक्त वक्तव्यबाट विगतमा रहेकाे वैरभाव अन्त्य हुने संकेत देखिएकाे छ । याे काेरियाली नागरिककाे लागि मात्र सुखद खबर नभएर विश्वकाे लागि नै उदाहरणीय कार्य बन्न पुगेकाे छ […]
अब कांग्रेसकाे कार्यदिशा र लाेकतान्त्रिक अभ्यास
नेपालपत्र, १३ वैशाख २०७५ । नेपाली कांग्रेस देशकाे एकमात्र लाेकतान्त्रिक विचार सिद्धान्त अवलम्बन गरेकाे पुरानाे पार्टी हाे । नेपालकाे राजनैतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानाे पार्टीकाे रूपमा स्थापित हुन सफल र देशकाे महत्वपूर्ण परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेकाे पार्टी हाे नेपाली कांग्रेस । राणा शासन अन्त्यकाे अान्दाेलनकाे नेतृत्वदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका प्रमुख अान्दाेलन र परिवर्तनकाे नेतृत्व लिएकाे शक्ति अहिले […]
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुस्त, सरकारको अग्रसरतामै कमी
नेपालपत्र, १२ वैशाख २०७५ । नेपालमा पछिल्लो भूकम्प गएको आज तीन वर्ष पुरा भएको छ । भूकम्पछिको यो अवधिमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा राज्यले चालेको कदम हेर्दा राज्यको क्षमता नभएको स्पष्ट हुन्छ । क्षमता मात्र होइन इच्छाशक्तिसमेत नभएको देख्न सकिन्छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि देशमा चार जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए तर पुनर्निर्माणले […]
लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा मात्र सीमित नबनाेस् !
नेपालपत्र, ११ वैशाख २०७५ । नेपालमा लाेकतन्त्र अाएकाे अाज १२ वर्ष पूरा भइसकेकाे छ । ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि नेपालमा लोकतन्त्र आएको भएपनि जनताले त्यसकाे महसुुस गर्न पाएका छैनन् । देशमा लाेकतन्त्रकाे पुनः बहाली भएसँगै राजनैतिक परिवर्तन भयाे । राजा हटेर जनताले देशकाे नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्राप्त भयाे । त्यही लाेकतन्त्रकाे जगमा टेकेर नयाँ संविधान […]
पुस्तक दिवस पुस्तक लेख्ने र पढ्नेहरुको उत्सव !
नेपालपत्र, १० वैशाख २०७५ । आज पुस्तक लेख्नेहरुको उत्सव तथा पुस्तक पढ्नेहरुको उत्सव । अझ भनौँ न पुस्तकमा रमाउनेहरुको उत्सव ।पुरानो लुगा लगाऔं, नयाँ पुस्तक किनौं भन्ने हाम्रो प्रचीन मान्यता रहेपनि त्यसले व्यवहारमा रुप धारण गर्न सकेको देखिन्दैन । त्यसमा पनि पछिल्लो समय पुस्तक पढ्ने संस्कृतिको कमी रहेको देख्न सकिन्छ । सन् १९९५ अप्रिल २३ […]
पार्टी एकता भावनात्मक एकतामा परिणत होस् !
नेपालपत्र, ९ वैशाख २०७५ । लेनिन जयन्तीको अवसरमा आज भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्तसभामा देखिएको दृश्यले बाम एकताले सम्पूर्ण कार्यकर्ताको भावनाको कदर गर्न नसक्ने देखिएको छ । एउटा संयुक्तसभामा त एउटै ब्यानरमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था बनेन । माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले विहान राखिएको ब्यानरमा लेलिन र माक्र्सको फोटो नभएको र सिद्धान्तको उपहास भएको भन्दै […]
नेपालकाे चीन-भारत सम्बन्ध सन्तुलित रहाेस् !
नेपालपत्र, ८ वैशाख २०७५ । केपी शर्मा अाेली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै भारतले नेपालसँग र विशेषगरी एमाले अध्यक्षसँग चिसिएकाे सम्बन्ध सुधारमा पहलकदमी लिएकाे छ । यता चिनियाँ सरकार पनि पछिल्लाे समयमा नेपालसँगकाे सम्बन्धलाई धेरै चासाेका साथ नेपालकाे मामिलामा सहभागिता खाेज्ने प्रयासमा रहेकाे पाइन्छ । छिमेकका दुई ठूला राष्ट्रले नेपाललाई महत्व दिनु राम्राे हाे तर नेपालले अब […]